Wardegeg ah : Gegidii dayuuradaha Caalamiga ah ee Sanca oo albaabada loo xidhay‏..Waa Maxay Sababtu. | Saraar Media Business
Posted by zakaria on April 7, 2012 in News, Wararka Afsoomaliga, World · 0 Comments
Gegiddi duyuuradaha ee magaalda Sanca ee dalka Yemen ayaa gebi ahaanba albaabada loo xidhay kadib markii ay ku hanjabeen ciidamo daacad u ah taliyii ciidamada cirku in ay weerari doonaan hadii diyaaradi fadhiisato iyo haday kacdaba
Taliyaha shaqada laga eryey ee ciidamada cirka waxa ay xaga hooyo ka walaalo yihiin madaxweynihii hore ee dalka yemen Cali cabdala Salax. dhacdadani maaha wax lala yaabo mana aha markii ugu horaysay ama ugu dambeysay ee falalka noocan ookale ahi ay ka dhacaan wadanka Yemen. wadanka Yemen waa wadan uu ragaadiey qabyaalada iyo u daacadnimada qabaailka oo ay wax walba u huraan ama u sameeyaan.
Dhibaatadan qabaailku waxay Yemen ka dhigtay wadan dib u dhacsan dhinac walba oo ka dambeeye wadamo badan oo dhigaalkooda ah.
Ciidamada Ammaanka Xaafadda Islii (Eastleigh) ee Nairobi oo Toogasho ku dilay Sedex nin oo Burcad ah